DALAB CUSUB: Barcelona Oo Aan Marnaba Ka Daalayn Rabitaanka Neymar, Dalab Cusub Oo Ay U Gudbiyeen PSG & Haddii Ay Kooxda Ree France Soo Ogolaatay. - Gool24.Net
Tababaraha Paris Saint-Germain ee Thomas Tuchel ayuu kasoo yeedhay hadalkii ugu miisaanka culusaa ee meel ku sheegaya mustaqbalka Neymar isaga oo sheegay in xiddigaasi uu si dhab ah u doonayo bixitaan.
Sida haatan laga soo xigtay wargeyska L’Equipe, Barcelona ayaa markale samaysay isku day ay PSG kaga doonayso 27 jirkan waxaana ay u gudbiyeen dalab cusub oo lacag iyo ciyaartoy iskugu jira.
Wargeyska ayaa sheegay in dalabkaas uu ka koobnaa Ivan Rakitic iyo Philippe Coutinho oo lagu daray 40 Milyan balse ay si sahlan kusoo diiday Paris Saint-Germain.
Barcelona ayaa dhawaan uun 120 Milyan kula soo saxeexatay weeraryahankii Atletico Madrid ee Antoine Greizmann waana sababta u diidaysa inay lacag badan oo toos ah ku kharash gareeyaan Neymar iyagoo taa bedelkeeda ciyaartoy adeegsanaya.
SIDOO KALE AKHRISO: QIIMAYN: Xidigihii Fashilmay,Kuwii Sida Layaabka Leh Isku Muujiyay Iyo Qiimaynta Ciyaartoyda Kooxaha Man United & Chelsea Ee Kulankii Old Trafford.
Xalka ugu fiican ee labada kooxoodba qancin kara ayaa u muuqda inuu yahay in Coutinho lagu daro heshiiskan oo laga dhigo mid xiddigo is dhaafsi maadaama Barca qudheedu ay doonayso inay iska iibiso xiddigaas.
Sidoo kale Rakitic ayaa xilli ciyaareedkan soo socda gali doona tartan adag oo khadka dhexe ee shaxda tababare Ernesto Valverde ah gaar ahaan kaddib imaatinka Frankie De Jong.
Si kastaba, PSG ayaan haatan isku daalin dalabkaas cusub ee ay ka heshay Blaugrana walow ay ka warqabaan in Neymar uusan ku faraxsanayn haddana waxa xaqiiq ah inaysan marnaba sahal kusii dayn doonin.
Warar kale ayaa sheegaya in Paris ay kaliya dhagaysan doonto dalab lacag kaliya ka kooban taas oo heshiis xagaagan gudihiisa qabsooma ku adkayn doonta Barcelona.
Dhinaca kale wakiilka Neymar ee Pini Zahavi ayay Barcelona u sheegtay inuu PSG kasoo dhameeyo heshiis ciyaartoy is dhaafsi ah balse waxaan la ogayn haddii uu soo qancin doono maamulka kooxdaas.